नयाँ – Himalaya Television
२ जेठ २०७८ काठमाडौं । दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण बढ्दो रहेकाले दुई महिनापछि धकेलिएको नयाँ शैक्षिकसत्र आगामी असार १ गतेदेखि शुरु हुनेमा अन्योल देखिएको छ । गत वर्षको महामारीको प्रभावका आधारमा चालु शैक्षिकसत्र, २०७७ लाई जेठ मसान्तसम्म लम्ब्याएर असार...
सन् २०२० कस्तो रह्यो ? नयाँ वर्षमा अन्त्य होला कोरोना ? भिडियोसहित)
१७ पुस २०७७ काठमाडौं । सन् २०२० कस्तो रह्यो भन्ने प्रश्न आउँदा विश्वका धेरै नागरिकको मुखमा आउने पहिलो शव्द हो कोरोना । यो वर्ष कोरोना महामारीले विश्वलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ । वर्षको अन्त्यतिर खोप आएकाले सन २०२१ मा...
१७ पुस २०७७ काठमाडौं । गे्रगोरियन पात्रो अनुसार आजदेखि नयाँ वर्ष इस्वी सन् २०२१ शुरु हुँदैछ । जिजस क्राइस्टलाई फाँसी दिएपछि इस्वी सन्को सुरुवात् भएको भन्ने भनाइ रहेको छ । पोप गे्रगोरीले जुलियन पात्रो अनुसारको सन्लाई प्रतिस्थापन गर्दै अहिले...